RN7 : Mirongatra ny fanafihana taksiborosy sy fiara tsotra -
AccueilSongandinaRN7 : Mirongatra ny fanafihana taksiborosy sy fiara tsotra
RN7 : Mirongatra ny fanafihana taksiborosy sy fiara tsotra
Nisesisesy indray ny fanafihan-dahalo tany amin’iny lalam-pirenena fahafito iny ny alarobia 16 may lasa teo. Fiara taksiborosy roa sy kamio nitondra entana iray no lasibatra tamin’izany, tamin’io andro io fotsiny. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia fiara fitateram-bahoaka miisa roa mampitohy iny Rn7 iny , hizotra aty Antananarivo, taraiky tany aoriana ary tsy tafaraka tamin’ireo namany, no indray lasibatra tamin’io andro io tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany alina.Teo amin’ny fokontany Soanatao, kaominina Tsarafidy, distrikan’Ambohimasoa no nitrangan’izany. Nobahanan’ireo olon-dratsy manodidina ny folo, nitondra fitaovam-piadiana tamin’ny vato ny lalana ka rehefa tsy afa-nandroso intsony ireo niharan-doza, dia nohararaotin’izy ireo norobaina. Vokany, lasa avokoa ny vola mitentina 03 tapitrisa Ariary, ny volamena ny sakaosy maro feno entana, ary ny findain’ireo mpandeha. Tsy nisy kosa ny aina nafoy na ny naratra.
Tonga teny an-toerana avy hatrany nijery ifotony ny zava-nisy ireo zandary avy ao Ambohimasoa vantany vao nahazo fampandrenesana, saingy efa tafaporitsaka ireo olon-dratsy. Fa tamin’io andro ihany, tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany maraina, dia kamio iray ihany koa no notafihan’ny dahalo tsy fantatr’isa nirongo basim-borona tao Antsahavory, kaominina Iavonomby Vohibola, distrikan’Isandra. Rehefa tsy afa-nanoatra ireo niharam-boina, dia noraofin’ireo olon-dratsy ny vola sy ny entam-barotra rehetra tao anatin’ity fiara vaventy ity. Olona telo, izay nahitana ny mpamily sy ny mpandeha roa tao anatin’izany ihany koa no naratra rehefa niantefan’ny balan’ireo tsy mataho-tody. Nitari-dositra nitsoaka ireto farany taorian’izay. Nentina namonjy hopitaly any Tambohobe Fianarantsoa kosa ireo naratra. Ankoatra ny fisian’ireo mpitandro filaminana manaraka ireo taksiborosy, dia nisy fotoana nanaovan’ny zandary hetsika manokana mihitsy iny lalam-pirenena fahafito iny, noho izy mafana amin’ny resaka fanafihan-dalana, saingy rehefa nitsahatra izany dia manomboka miverina tsikelikely amin’ny fanaony indray ireo olon-dratsy, izay tsy iza fa mponina eny amin’ny manodidina ihany.